China 5445 Onye na -enye mmiri ọkụ na -enye ọkụ ọkụ ọkụ ngwa ngwa maka ụlọ na ebe ọrụ | Teknụzụ nzacha
5445 Onye na -enye ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ngwa ngwa maka ezinụlọ na ebe ọrụ
Nweta mmiri esi mmiri dị ọcha na nke a ga -etegharị ozugbo na iko gị n'otu ntabi anya.
Ịgba ọsọ ọsọ na sekọnd 3, echeghị ọzọ.
Mmiri mmiri dị iche iche na oke mmiri dị maka iji kwa ụbọchị.
Nnukwu nnukwu tank mmiri, ọ dịghị mkpa ka emeju ya ugboro ugboro.
Ngosipụta TDS ọpụpụ, lelee ịdịcha mmiri nzacha dị mfe.
Njirimara ihe ngosi dabara adaba iji mee ka ị mara mgbe ị ga -eji dochie ihe nzacha ahụ.
Smart na-efegharị onwe ya iji hụ na mmiri dị mma na-enye ya mgbe niile.
Na -abịa na kọmpat na nkecha, enweghị nrụnye pụrụ iche.
Nhọrọ mbụ gị maka ị drinkụ mmanya ezinụlọ
Ọkụ ọkụ ọkụ na sekọnd 3
Nri ngwa ngwa na -enye gị ohere ịme iko kọfị n'ime sekọnd 3
Ndepụta nke ọma
Ọtụtụ ọkwa, arụmọrụ nzacha ka mma
Ngwaọrụ anaghị achọ nrụnye ọ bụla, naanị plọg wee malite iji ya
Ịgba ọsọ ọsọ, Ịchekwa Ike
Onye na -enye mmiri ọkụ a ozugbo na -enye mmiri ọkụ ozugbo na iko gị, yabụ na a gaghị echere ichere ka esi esi. Nri ngwa ngwa na -enye gị ohere ịme iko kọfị n'ime sekọnd 3. Ka ọ na -agbapụta oke mmiri ị chọrọ, ma e jiri ya na ketulu ọdịnala nke na -esi mmiri ugboro ugboro, onye na -enye mmiri ọkụ a ozugbo na -azọpụta nnukwu ume, nke na -arụ ọrụ nke ọma, dabara maka ezinụlọ na ebe ọrụ ebe ọ dị mkpa iji belata ọpụpụ ike.
Onye na -enye mmiri ọkụ a ozugbo na -anabata teknụzụ nzacha mejupụtara nke na -ejikọ ọtụtụ ụzọ nzacha nzacha maka ịrụ ọrụ nke ọma. Ihe nzacha CF nwere ntụpọ PP gbazere agbaze na mgbachi carbon na -arụ ọrụ iji wepu nnukwu ihe na chlorine na mmiri na mbụ. Usoro MRO gụnyere akpụkpọ ihu osmosis na -agbanwe agbanwe, ihe mgbochi carbon na -arụ ọrụ na mgbaze PP na -agba iji belata mmetọ dị ka TDS na ọla dị arọ.
Nkwụnye na Gwuo, agagharị enyi na enyi
Ngwaọrụ anaghị achọ nrụnye ọ bụla, naanị plọg wee malite iji ya. Yabụ na ọ nwere ike ịnọdụ ala ebe ọ bụla nke tebụl tere aka na isi mmiri, dị ka ime ụlọ, ime ụlọ iri nri, ụlọ ezumike, wdg. igbanwe ebe.
Nnukwu tank, na -ejuputa ya
Onye na -enye mmiri ọkụ na -abịa ozugbo nwere nnukwu ihe mkpofu nke nwere ike ruru 1.5L, buru oke ibu iji nweta 3L mmiri na -aga n'ihu (na -emepụta mmiri mgbe ị na -enweta mmiri), yabụ na ọ dịghị mkpa ịnọgide na -emeju ya ugboro ugboro. Naanị mkpa ị wepụta tank mmiri wee mejupụta ya na mmiri mgbe ọ bụla mmiri gwụchara. E wezụga nke ahụ, a na -eme tank mmiri ka o doo anya ka ị hụ site na ụlọ plastik ị nwere ike ịsị ozugbo ọkwa mmiri na mgbe ọ ga -emeju.
Akụkụ 435 × 178 × 395mm
Ọdịdị mmiri mmiri mmiri na -emetụta 5-38 ℃
Ịnye ọkụ 220V/50HZ
Nhazi nzacha CF (PP+CB)+MRO (RO+CB+PP)
Oke ike 2200W
Ike tank mmiri 1.5 l
Oke mmiri na -asọba (95 Celsius C) 0.4-0.5L/min
Usoro kpo oku Oké film kpo oku
Nke gara aga: Ezigbo ụlọ Sediment PP Meltblown Filters
Osote: 5290 Akwadoro arụmọrụ dị elu nke ụlọ niile na -emegharị mmiri
Counter Top Isiokwu Water purifier
Onye na -ekesa mmiri enyocha
Point Of Jiri Water Myọcha
Mfe mmiri nzacha
Nchachacha mmiri Smart
Isiokwu Top Water Myọcha
Isiokwu mmiri purifier
Mmiri Myọcha na Dispenser
Mmiri na -asachapụ mmiri na onye na -ekesa ya
Ihe nchacha mmiri maka iji ụlọ eme ihe
5677 Countertop Ultrafiltration Water Ọgwụgwọ ...
5659 Countertop UF Mmiri na -asacha mmiri
5673 Countertop Ultrafiltration Water Ọgwụgwọ ...
5439 Onye na -enye mmiri ọkụ na -ekpo ọkụ ozugbo
Sistemụ osmosis kacha mma, Ụlọ na -asachacha mmiri n'ụlọ, Mmiri na -asacha mmiri Maka mmiri siri ike, Kpatụ sistemụ nzacha mmiri, Njikere nzacha, Nnọchi Ihe Njikere Njikere Mmiri,